अघि बढ्ला त बूढीगण्डकी आयोजना ? | Sajhakhabar अघि बढ्ला त बूढीगण्डकी आयोजना ? | Sajhakhabar
काठमाडौँ, साउन ७ : लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई गति दिन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको भनिए पनि आशातितरुपमा काम अगाडि नबढेपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक पहल थालेको हो ।
स्थानीयवासीले सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाबारे पनि शीघ्र निर्णय गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालसँग भेट गरी समस्या समााधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए । घर तथा जग्गाको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको आयोजना प्रभावितको भनाइ छ । स्थानीयको मागअनुसार मन्त्री भुसालले ह्रासकट्टीबापतको रकम जनतामा जाने पैसा भएकाले नकाट्न आग्रह गर्नुभयो ।
आखिर जनता नै हुन्, उनीहरुले कर तिरेकै छन् । त्यही करबाट हामी चलेका छौँ । राज्य चलेको छ भने जनतलाई किन मर्का पार्ने”, मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक दिएकाले राज्यले आयोजना प्रभावितलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका भन्दै लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लाग्दै आएको छ । सो करबापत हालसम्म करीब रु ४५ अर्ब बराबरको रकम जुटिसकेको छ ।